स्रष्टा पदयात्राको ११औँ श्रृङ्खला सम्पन्न | Agni News Agni News
२०७५ फाल्गुन ७, मंगलबार , नेपाली समय : ०३:२४ pm
२०७४ आश्विन ७, शनिबार ०८:१२ PM
काठमाडौँ, ६ असोज, स्रष्टा पदयात्राको ११औंँ श्रृङ्खला शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । काठमाडौँको एक ऐतिहासिक शहर साँखुबाट सुरु भएको पदयात्रा बज्रयोगिनी मन्दिर, मडिचुड पर्वत हुँदै सुन्दरीजल पुगेर सम्पन्न भएको हो ।
पदयात्रामा साहित्यकार तथा अनुसन्धाता शीतल गिरी, साहित्यकार तथा अनुसन्धाता डा. भक्त राई, कवि शशी थापा पण्डित, छन्द कवि शान्ति सापकोटा, पत्रकार डिल्लीरमण सुवेदी, साहित्यकार तथा प्राध्यापक डा. नेत्र एटम, नियात्राकार पोष चापागाई र हङकङबाट आएका कवि टंक सम्बाहाङ्फे अतिथि पदयात्रीको रुपमा सहभागि भएका थिए ।
पदयात्राको क्रममा समसामयिक र साहित्यिक विषयमा छलफल भएका थिए भने स्थानीय महत्वका वस्तुहरुको अनुगमन गर्ने, सोधखोज गर्ने र आवश्यक विवरण टिपोट गर्ने कार्य भएको थियो । बज्रयोगिनी मन्दिरको ऐतिहासिकता र विशेषताको बारेमा अनुसन्धाता शीतल गिरीले जानकारी गराएका थिए । यो मन्दिर साँखु बजारबाट करिब ५ किलोमिटरको दुरीमा रहेको छ । बोन दर्शन वा धामी झाँक्रीको आस्थाको देवीको रुपमा स्थापित यो मन्दिरको अहिले पनि उत्तिकै महत्व रहेको छ । गिरीका अनुसार साँखु शहर बस्नु भन्दा पहिलेदेखि नै यो मन्दिरको अस्थित्व रहेको छ । यसैगरी यो क्षेत्रमा बज्राचार्यहरुले विक्रम संवतको संस्थापक विक्रमादित्यको शीरलाई संरक्षण गरेर राखेका छन् । जसलाई हरेक वर्ष पूजा गर्ने, रथयात्रा गराउने गर्दछन् । विक्रमादित्यले प्रयोग गरेको कराई हालसम्म पनि यहाँ संरक्षण गरेर राखिएको छ ।
यसैगरी घुमारचोकमा तामाङहरुको बाक्लो बस्ती रहेको छ । यहाँका तामाङहरुको मुख्य पेशा भनेको तरकारी खेती हो । यहाँ धेरैभन्दा धेरै स्कुस उत्पादन हुने गरेको छ । हरेकको घरमा स्कुसका ठूला ठूला माच देख्न पाइन्छ । उनीहरुको प्रमुख नगदे बाली नै स्कुस रहेको पाइयो । बाटो घाटोको सुविधा भए पनि यहाँको स्कुसले उचित मूल्य भने पाउन सकेको छैन । यहाँ करिब १० रुपैयाँ धार्नीमा स्कुस किनबेच हुने गरेको छ । ठेकदारहरुले यहाँबाट स्कुस संकलन गरेर राजधानीमा ल्याएर महङ्गो मूल्यमा बेच्ने गरेका छन् । यसबाट किसानहरु प्रत्यक्षरुपमा पीडित बनेका छन् ।
स्कूसको व्यवसायिक खेती गरिए पनि सो क्षेत्रमा अन्य तरकारीको भने खेती गरेको पाइएन । यहाँका किसानहरुले मकै र कोदो लगाउने गरेका छन् । आधुनिक तरिकाले तरकारी खेती गरी आम्दानी बढाउने तर्फ कसैको पनि ध्यान जानसकेको देखिएन । परम्परागत रुपमै खेती गर्दै आएका यहाँका तामाङहरुमा नजिकै काठमाडौँ जस्तो ठूलो बजार भए पनि त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकेको पाइएन ।
करिब २५०० मिटरको उचाइमा रहेको मडिचुड पर्वत एक ऐतिहासिक र प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण स्थल हो । उपनिषद् कालिन राजा मडिचुडले यज्ञ गरेको स्थान भनेर पनि चिनिन्छ यो स्थान । यहाँ एक ठूलो पोखरी रहेको छ । जंगलकोबीचमा सुन्दर पोखरीले पर्यटकलाई मोहित बनाउने गर्दछ । राजा मडिचुडले यज्ञगर्दा पोलेका कोइला पोखरीको पीधमा भएकोले यहाँको पानी कालो देखिने मान्यता रहेको छ ।
विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको सुम्निमा उपन्यासमा सुम्निमाले सोमदत्तलाई मनुवा जगाउन ल्याएको एउटा दहको प्रसंगसँग ठ्याक्कै मिल्दो स्थान भएको प्राध्यापक नेत्र एटम बताउँछन् । तामाङ बस्तीकोबीचमा घना जंगल त्यसकोबीचमा एउटा सुन्दर पोखरी र पोखरीमा कालो पानी भएको यो दह हेर्दा सुम्निमाको याद आएको उनले बताए ।
यो ऐतिहास र प्राकृतिक सुन्दर स्थलको अवलोकनपछि पदयात्रीहरु सुन्दरीजल तर्फ प्रस्थान गरेका थिए । मडिचुडबाट करिब ४ घण्टाको निरन्तर यात्रापछि साँझ ६ः३० बजे सुन्दरीजल बजार पुगेर पदयात्रा सम्पन्न भएको थियो । बिहान १०ः३० बजेबाट सुरु भएको पदयात्रा ८ घण्टाको निरन्तर यात्रापछि सम्पन्न भएको थियो । बाटो लामो भएको कारण समय अभावले यो पटक रचना वाचन र सिर्जनाको कार्य भने हुन सकेन ।
स्रष्टा पदयात्रा हरेक महिनाको पहिलो शुक्रबार आयोजना हुने गर्दछ । 'स्वास्थ्य र सिर्जनाकालागि पदयात्रा' भन्ने मुख्य उद्देश्यसहित राजधानीमा बसोबार गरिरहेका स्रष्टाहरुको समूह यसरी पदयात्रामा जाने गर्दछन् । यो पदयात्रामा स्थानीय स्थलहरुको अवलोकन, लेखन, पुस्तक विमोचन, रचना सिर्जना तथा रचना वाचनको कार्य हुने गर्दछ ।